Maître Avoko Rakotoarijaona : “ Tsy maintsy harovana ny safidim-bahoaka” -
AccueilRaharaham-pirenenaMaître Avoko Rakotoarijaona : “ Tsy maintsy harovana ny safidim-bahoaka”
Nipoitra tamin’ny fahanginany ny maître Avoko sy ny antoko tarihiny, Antoko Madagasikara Afaka na MAF, miaraka amin’ny Kung-Fu eto Madagasikara. Manoloana ireo fanaratsiana sy fihantsiana ataon’ireo mpitarika antoko politika mpanohitra mantsy, nanambara ity mpitarika ny Kung-Fu eto Madagasikara ity fa tsy mitombina ny filazana fa mafampana ny toe-draharaham-pirenena. “Hafanaina sy terena hafampana fotsiny ny toe-draharaham-pirenena amin’izao fotoana izao, mba hisian’ny fanetsehana ambadika hanozongozonana ny fitondran-dRajaonarimampianina. Porofon’izany, ny fisian’ireo fitokonana sy fitakiana miseholany eto amin’ny firenena”, hoy i Maître Avoko.
Tsy handroso mihitsy isika, hoy izy, raha izay filoha lany eo no hiezakezahana haongana.
“ Tsy maintsy harovana ny safidim-bahoaka. Io filoha Hery Rajaonarimampianina io aloha no lanim-bahoaka, dia aleo izy hiasa. Izay te hitondra dia efa akaiky ny 2018 andro hisian’ny fifidianana indray”, hoy hatrany ny Maitre Avoko.
Nambaran’ity filoha nasionalin’ny MAF sady mpitarika ny Kung-Fu eto Madagasikara ity fa hijoro ary hiaro ny zava-bitan’ny Filoha Hery Rajaonarimampianina izy ireo ary hanaitra ny vahoaka malagasy hatrany mba tsy ho voarebirebin’ireo mpanakorontana eto amin’ny firenena ka hiverenana na/sy hisian’ny krizy vaovao indray.
Ankoatra izay, nohitsian’ny Maître Avoko ihany koa fa misy amin’ireo antoko politika ireo no mahasahy milaza fa manana olona an’aliny maro hanotrona azy ireo amin’ny famoriam-bahoaka kasainy atao ka izany no heverin’izy ireo ho fampisehoan-kery eto amin’ny firenena. “Vonona amin’ny fampisehoan-kery ihany koa izahay eo anivon’ny Kung-Fu eto Madagasikara sy ny MAF raha ilaina izany ho fanohanana izao Fitondrana mijoro izao fa tsy ny famoriam-bahoaka kely etsy sy eroa no lazaina sy ankalazaina fa mahazo olona”, hoy hatrany izy.
Na izany aza anefa, hoy izy, tsy fahendrena ny fifampihantsiana sy ny mifanao vava toy ny ataon’ireo mpanao politika sasany izay manakiana sy manenjika be fahatany. Ny tsara indrindra, raha ny voalazany, samy manomana amin’ny fiatrehana ny fifidianana 2018.
Nanambara ny Maître Avoko fa ny Fitondram-panjakana ankehitriny dia mizotra mankany amin’ny fampandrosoana ny firenena sy fitsinjovana ny fiainam-bahoaka. Noho ny fahatsapan’ny Kung-Fu eto Madagasikara sy ny MAF izany no antony goavana hijoroany amin’ny fiarovana ny zava-bitan’ny Filoha Hery Rajaonarimampianina.
Etsy andaniny, hanatanteraka kaongresy nasionaly ny eo anivon’ny Antoko Madagasikara Afaka ary miara-dalana amin’izany koa ny Fihaonambe nasionalin’ny Kung-Fu eto Madagasikara, ny 20 Aogositra ho avy izao, etsy amin’ny Lapan’ny Fanatanjahantena Mahamasina. Hifanindran-dalana amin’ireo hetsika roa ireo koa ny fiadiana ny Tompondakan’i Madagasikara eo amin’ny taranja Kung-Fu ka manodidina ny 10.000 any ho any ireo mpandray anjara amin’ireo hetsika ireo.